भाग्यमानी छोरा : भाग १ - 'आमामाथी गिद्वे नजर'
बहुचर्चित यौन उपन्यास "भाग्यमानी छोरा" को भाग एकमा छोरा साथीको उक्साईमा परेर आमामाथी गिद्वे नजर गाड्न पुगोछ । यतिमात्र नभई उसले आमाको फोटोमा पोर्न स्टारहरुको फोटो मिलाएर आमामाथी अनैतिक कल्पना गर्छ ।
म महेन्द्र, मेरो घर पेप्सीकोला, काठमाण्डौं पर्छ । मेरो परिवारमा बुबा, आमा, म र एउटी बहिनी छौं । बहिनी रुबीमा र म एउटै स्कूलमा पढ्ने गर्छौं, खाली म भौतिक विज्ञान विषय लिएर १२ कक्षामा छु भने रुबीना व्यवस्थापन विषय लिएर ११ कक्षा पढ्दैछे । हाम्रो घर छेउमै दुई-तिनवटा स्कूलहरु भएकोले आमाको आग्रहमा बुबाले स्टेशनरी पसल खोल्नुभएको थियो । स्टेशनरीमा प्रायः बिहानको समयमा बुबा बस्नुहुन्थ्यो भने कहिलेकाँही मात्र हामी बस्थ्यौं, त्यस्तो समय भनेको प्राय: बुबा पसलको लागि चाहिने आवश्यक सामान लिन न्युरोड जाँदा वा कुनै काम विशेषले जाँदा मात्र हुन्थ्यो । हाम्रो घरमै हाम्रो पसल भएकोले त्यस्तो कुनै समस्या थिएन । पसलको आम्दानी र घरमा बस्ने केही भाडावालाहरुबाट उठ्ने भाडाबाट हामीलाई जिवनयापनमा कुनै समस्या थिएन । समग्रमा भन्दा पसल र गृहस्थी राम्रैसँग चलिरहेको थियो । घरको कुरा गर्दा अगाडीको सटरमा एउटा स्टेशनरी पसल थियो र अर्कोमा एकजना अंकलले फेन्सी पसल राख्नुभएको थियो, पछाडीको दुईवटा कोठा फेन्सीवाला अंकलले नै भाडामा लिनुभएको थियो । पहिलो तलामा एकजना मार्केटिङ्ग कम्पनीमा काम गर्ने दाजुले दुईवटा कोठा र कलेज पढाउने दुईजना सरहरुले दुईवटा कोठा भाडामा लिनुभएको थियो । दोश्रो तलामा हामी बस्थ्यौं । दोश्रो तलाको कुरा गर्दा एउटामा किचन थियो भने, एउटा चाँही बैठक कोठा थियो । बाँकी एउटा कोठामा म सुत्ने गर्थें भने एउटामा बहिनी सुत्ने गर्थी । म चाँही सबैभन्दा माथिल्लो तलामा एउटा कोठामा बुबा-आमा सुत्नुहुन्थ्यो र एउटा कोठा पाहुनाहरु आउँदा सुत्ने गरी छुट्याईएको थियो, पाहुना नआउँदा भने आमाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो । बहिनी र मेरो कोठामा ईन्टरनेट सहितको ल्यापटप थियो, बुबा-आमाले भने एउटा ट्याबलेटको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो । मेरो कोठाको दराज मैले सधैं बन्द गरेर राख्ने गर्थें, उसैपनि मेरो अनुमति बिना कोहिपनि मेरो कोठामा छिर्दैनथ्यो । त्यति हुँदाहुँदै पनि म बैठक कोठामा राती अबेरसम्म टि.भी.मा स्पोर्ट्स च्यानलमा रेस्लिङ्ग अनि प्राय: फुटबल हेरेर बस्थें, कहिलेकाँहि रुबीनाले सिरियल हेर्न पाईन भनेर झगडा गर्थी, त्यसमा आमाले पनि साथ दिनुहुन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा म रिसाउँदै आफ्नो कोठामा छिरेर ल्यापटप चलाएर बस्थें, बिहान स्कुल जानुभन्दा अगाडी मात्र म पढाई गर्थें ।
हरेक दिन बिहान साढे पाँचबजेतिर म जगिङ् गर्न फुटबल मैदान पुग्थें र बिहान साढे छ बजेतिर मात्रै आईपुग्थें । घर आएपछी नुहाएर म पढ्न बस्थें, आमाले मलाई मेरो कोठामै बिहानको नास्ता ल्याईदिनुहुन्थ्यो । बहिनी रुबीना भने किचनमै पुगेर नास्ता गर्थी, बुबा बिहान मसँगै उठेर बानेश्वर पुगेर पत्रिकाहरु ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो । बुबाको एउटा खराब बानी थियो, हरेक दिन रक्सी पिउनुपर्ने, रक्सी ठिक्क पिएको बेलामा कहिलेकाँही हामीसँगै बसेर टि.भी. हेर्थ्यौं भने ज्यादा पिएको दिनमा आफ्नो कोठामा गएर सुतिहाल्नुहुन्थ्यो । रक्सीको कारणले घरमा झगडा भएको त थाहा भएन, तर बुबाले धेरै रक्सी पिएर आएको दिन भने आमाको मुहार चिन्तीत रहन्थ्यो र आमा राती अबेरसम्म टि.भी. हेरेर बस्नुहुन्थ्यो । अबेरसम्म टि.भी. हेरेपनि आमाले मैले हेर्दै गरेको रेस्लिङ्ग वा फुटबलनै हेरेर बस्नुहुन्थ्यो । धेरैजसो अबेरसम्म टि.भी.मा रहँदा आमा सोफामै निदाउनु हुन्थ्यो र मैले आमालाई झकझकाएर सुत्न जानु भनेर पठाउँथे । आमा मन नलागेझैं गरि माथ्लो तलामा उक्लनुहुन्थ्यो । यसरी नै हाम्रो परिवारको दैनिकी चलिरहेको थियो । कहिलेकाँही बुबा नहुँदा म पसलमा बस्थें र सकेजति पत्रिकाहरु पल्टाउने गर्थें, बिशेषगरि बुबा नहुँदा म साप्ताहिकको भित्री पृष्ठहरुमा मस्त हुन्थें ।
एकदिन पसलमा बस्ने क्रममा पुराना पत्रिकाहरु एउटा कुनामा थन्क्याएको ठाउँमा मेरो आँखा पर्यो, केही पत्रिकाहरु राम्रैजस्ता देखिन्थे, मैले त्यहाँ हेर्न थालें, धुलैधुलो भएको त्यहाँ मेरो हातमा हस्टलर भन्ने म्यागजिन पर्यो । बाहिरी आवरणमै एउटी केटीको नग्न चित्र भएको त्यो पत्रिकाले मलाई निकै लोभ्यायो र मैले त्यो पत्रिका समातेर धुलो सफा गरें अनि तुरुन्तै आफ्नो कोठामा पुगेर दराजमा लुकाएर पून: पसलमा आएं । स्कूलमा साथीहरुले सेक्सका कुरा गर्दा म त्यति चासो राख्दिनथें, तर त्यो पत्रिकाले मेरो सबै बानी बेहोरामा परिवर्तन ल्याईदियो । त्यो पत्रिका पढेपछी म मेरो साथीहरुसँग पनि सेक्सका कुरामा सहभागी हुन थालेको थिएँ । त्यसपछीका दिनहरुमा मैले त्यस पत्रिकामा दिइएका हरेक लिङ्कहरुमा गएर ईन्टरनेटको मजा लिन थालेको थिएँ । आजकाल साथीहरुसँग ब्लु-फिल्महरु पनि निकै साटासाट हुन थालेको थियो । फलत: मेरो नजरले हरेक स्त्रीहरुलाई कपडा हटाएर परिकल्पना गर्न थालेको थिएँ । आजकाल ईन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको फोटोमा साथीहरुले स्कूलमा खिचेका केटीहरुको फोटोबाट टाउको क्लोन गरेर मजा लिने आदत झैं भईसकेको थियो, त्यसमाथी म फोटोसप राम्ररी चलाउन जान्दथें । एकदिन विकेशले एउटा पेन ड्राइव मलाई दिएर भन्यो कि यसमा भएको केही फोटोलाई सन्नी लियोनी जस्तै फिगरमा एडजस्ट गरेर ल्याईदे, मैले हुन्छ भनेर उसँगबाट पेन ड्राइव लिएर घर आएँ । घर आएर म रेस्लिङ्ग खेल हेर्नमा मग्न भएँ । राती १०:३० तिर म आफ्नो कोठामा छिरेर विकेशले दिएको पेन ड्राइव खोलेर हेरें अनि त्यसमा भएको फोटोलाई क्लोनिङ्ग गर्न थालें । मलाई फोटोमा भएकी केटी कता कता देखेको जस्तो लागिरहेको थियो तर मेसो पाईरहेको थिईन । भोलीपल्ट मैले विकेशलाई पेन ड्राइव फिर्ता गर्दै सोधें “त्यो फोटोको केटी को हो ?” विकेश केहि बोलेन, अर्को दिन विकेशले अर्को फोटो दिएर अलि प्रिया-अन्जली आन्टी टाइपको फोटोमा क्लोन गर्न भन्यो । अलिक उमेर पुगेको त्यो आईमाईको फोटो पनि कहीं देखे-देखे जस्तो मलाई लाग्थ्यो । निकै दिमागमा जोड गरेपछी पनि ती फोटोमा भएको अनुहार पत्ता लगाउन गाह्रो पर्यो, तर जब मेरो आँखामा विकेशको फेसबुक प्रोफाईल पर्यो तब थाहा भयो कि फोटो त विकेशको दिदी र आमाको पो रहेछ ।
भोलीपल्ट मैले विकेशलाई अलि एकान्तमा बोलाएर निकै हपारे । विकेशले निकैवेरसम्म मौन बसेर छुट्टिने बेलामा मलाई भन्यो “यार ! मैले दिदी र आमालाई जति कोशिस गरेपनि अर्को नजरले हेर्न सकिन... बरु कसरी पट्याएर मेरो विस्तारामा ल्याउन सकिन्छ... बरु आइडिया दे न...” म अति नै अचम्मित थिएँ । मैले विकेशलाई गाली गर्दै नचाहिने कुरा गर्छस् भन्दै छुट्टिएर घरतिर लागें । घरमा पुगेर पनि म निकैवेरसम्म विकेशको कुवुध्दीलाई सराप्दै बसें, रुबीना आफ्नै कोठामा छिरेकी थिई, आमाले हामीलाई नास्ता ख्वाउनुभयो । राती दश बज्नै लागेको थियो, बुबा तलबाट दारुको नशामा झुम परेर आउनुभयो, आमाको अनुहारमा चिन्ता थपिएको थियो । बुबाले खाना खान्न भनेपछी आमा र बुबा माथील्लो तलामा उक्लनुभयो । म टि.भी.मा रेस्लिङ्ग हेरेर बसिरहेको थिएं, लगभग २० मिनेटमा आमा तल उत्रनुभयो र किचनमा गएर जगमा पानी भर्नुभयो । पानीको जग सोफा अगाडीको टि-टेबुलमा राखेर आमा मेरो छेउमा बस्नुभयो । आमाको शरीरमा यतिखेर सुत्दा लगाउने नाईटरोब थियो, आमा मनमनै केही बरबराइरहनु भएको जस्तो लाग्थ्यो । आमाको सोफामा बसाई नमिलेर होला नाईटरोब खुकुलोजस्तो भान भइरहेको थियो भने नाईटरोबबाट आमाको तिघ्रा बाहिर देखिएको थियो । अचानक मलाई विकेशको कुरा सम्झना आयो । नचाहेर पनि मेरो आँखा आमाको तिघ्रातिर पुगिरहेको थियो भने मेरो मस्तिष्कमा विकेशको दिदी र आमाको मोडिफाइड नग्न तस्वीर नाचिरहेको थियो ।
आँखाभरी त्यसरी दृष्यहरु नाचेपछी एकाएक मेरो मुख सुख्खा भएर आयो र मैले पानी पिउने हेतु झुकेर टि-टेबुलमा भएको जग समाउने कोशिस गरें । यतिखेर मेरा हातहरु हल्का कम्पनमा हल्लिरहेका थिए, मैले पानी घटाघट पिएं र जग राख्ने बेलामा पून: आमालाई हेरें, आमाको नजर टि.भी. तिरै थियो । तर मेरो नजरले आमाको नाईटरोबभित्र चियाउन सक्षम भयो, मलाई थाहा भयो कि आमाले नाईटरोबभित्र ब्रा लगाउनुभएको थिएन तर आमाको बुब्स मस्त तरुनीका झैं पोटीला र भरिला थिए । आमाको बुब्समाथीको निपल निकै उठेजस्तो लाग्थ्यो र निपलका वरपर गाढा घेरा प्रष्ट देखिन्थे । आमाले प्राय: राती सुत्ने बेलामा नाईटरोब लगाएको मलाई थाहा थियो तर यसरी उहाँको लवाईमा मैले ध्यान दिएर हेरेको पनि थिईन । नाईटरोब नलगाउँदा आमाले गाउन लगाएको चाँही मलाई थाहा थियो । आमा एकोहोरो टि.भी.मै हेरिरहनुभएको थियो । हरेको मिनेटजसो अन्तरमा नचाहि नचाही मेरो नजर आमामाथी परिरहेको थियो, केहिपछी आमाको बसाईमा हल्का हलचल भयो, मैले मेरो ध्यान टि.भी.मा छ भन्ने देखाउन च्यानल चेन्ज गरें । तर मेरो होस कहाँ ठेगानमा थियो र एचबिओ च्यानलमा गएर म रोकिएं कस्तो संयोग भने जेम्स बोण्डको मुभिमा बेडसिन ठ्याक्कै आएको बेलामा म रोकिएँ । ऐन मौकामा आमाको र मेरो नजर एकापसमा जुध्यो, आमाको नजरमा कुनै भाव थिएन बरु मेरो आँखामा भने निकै त्रास चढिसकेको थियो, मैले पून: च्यानल चेन्ज गरें र इएसपिएन लगाएँ । त्यहाँ पनि कण्डमको विज्ञापन आइरहेको थियो, मेरो हात रोकियो उसो त कण्डमको विज्ञापन पहिले पनि हेरेकै हो, तर विकृत मस्तिष्क भएको बेलामा भने त्यसको अर्कै असर अनुभव हुँदो रहेछ । कट्टुभित्र मेरो लाँडो उठेर जुर्मुराइसकेको थियो जसले गर्दा न म उठेर आफ्नो कोठामा जानसक्ने हालतमा थिएँ । न कट्टुभित्र हात छिराएर लाँडोलाई मिलाउन सक्ने हालतमा । म चुपचाप फुटबल हेरिरहें । आधाघण्टाजस्तो पछी मेरो नजर आमामाथी पुग्दा आमा सोफामै निदाइसक्नुभएको थियो । आमा निदाउनुभएको निश्चिन्त भएपछी मैले आमालाई धित मर्नेगरि हेरें । निदाउने क्रममा आमाको शरिरबाट नाईटरोब अझै बढी हटेको थियो र आमाको आधाजसो बुब्स बाहिर निस्किएको थियो । ब्लु-फिल्म, सेक्स म्यागेजिन हेर्दा पनि सजिलै नठन्किने मेरो लाँडो आमाको थोरै बुब्सको झल्कोमै जुरुक जुरुक भइरहेको थियो । यतिखेर भने मैले ढुक्कले लाँडोलाई कट्टुभित्र मिलाएँ र रिमोटले टि.भी. बन्द गरेर आफ्नो कोठाको ढोकामा पुगेर आमालाई आवाज दिएँ । आमाले कस्तो आँखा लागेछ भन्दै मतिर फर्केर हेर्नुभयो अनि मैले सुत्न जानु भन्दै आफ्नो कोठामा छिरें । त्यो रात आमाको बुब्सको झल्कोले मेरो निद्रा हराम भयो, मैले दुईपटकसम्म लाँडोलाई हातले शान्त पारें ।
भोलिपल्ट बिहान घडीको आलार्मले बिऊँझिएर म ट्वाइलेट छिरें अनि जगिङ्गको लागि म आफ्नो कोठाबाट बाहिर निस्कँदासम्म आमा त्यहीं सोफामै सुतिरहनुभएको थियो । आमाको र्याप नाईटरोबबाट एउटा बुब्स पुरै बाहिर थियो र तिघ्रा पुरै नाङ्गो भएपनि आमाको हातभने दुवै तिघ्राको बिचमा च्यापिएको थियो । मलाई त्यहाँ धेरै बेर बिताउन निकै सकस भएकोले म मुल ढोका खोलेर बाहिर निस्किएँ । त्यति नै बेला बुबा “सुमीना” भन्दै तल झर्नुभयो । बुबा बैठकमा आईपुग्दासम्म म पसल अगाडिको बाटोमा निस्किसकेको थिएँ । जगिङ्ग गरेर फर्कंदा बुबाले पसल खोलिसक्नुभएको थियो, म माथी उक्लिएँ, म आफ्नो कोठामा छिर्न लाग्दा किचनमा नजर पुर्याएँ। आमा अझैपनि र्याप नाईटरोबमै किचनको काम गरिरहनुभएको थियो । म नुहाउन थालें, नुहाउने क्रममा मैले फेरी लाँडोलाई हातले शान्त पारें । नुहाईसकेर कपडा लगाएर म कम्प्युटर खोल्न मात्र लागेको थिएँ, आमाले चिया-नास्ता ल्याएर मलाई दिनुभयो । त्यसपछी म कम्प्युटरमा फोटोहरु हेर्न थालें, मैले कम्प्युटर बन्द गर्दासम्म ल्यापटपको डेस्कटपमा एउटा फोल्डरभित्र आमाको केहि सिंगल डिजिटल फोटोहरु छानिएर बसेका थिए । जिवनमै पहिलोपटक मैले आफ्नो पढाई छोडें र होमवर्क पनि गरिन । स्कुलमा पनि मेरो दिमागले खासै काम गरेन, विकेशले के भयो भनेर सोध्दा हल्का सञ्चो छैन भनेर टारें । बेलुका फर्कदाँ पनि रुबीना र म केहि नबोली घरसम्म आयौं, मेरो दिमागमा आमाको बुब्स नै घुमिरहेको थियो । खाना खाईवरी म टि.भी.मा मस्त थिएँ । रुबीना आफ्नै कोठामा पढीरहेकी थिई । लगभग आधा घण्टामा आमा हिजोकै र्याप नाईटरोबमा सजिएर मेरो छेउमा आएर बस्नुभयो अनि “खै रिमोट ले त !” भनेर मसँग टि.भी.को रिमोट माग्नुभयो र च्यानल चेञ्ज गर्न थाल्नुभयो अनि स्टार प्लसमा सिरियलमा व्यस्त रहनुभयो, म चुपो लागेर आमाले हेरेकै च्यानल हेर्न थालें । सिरियल सकिन लाग्दा बुबा आइपुग्नुभयो र आमाले मलाई रिमोट दिएर बुबाको छेउमा जानुभयो । मैले स्पोर्टस् च्यानल लगाएँ, बुबा झ्याप भएर आउनुभएको थियो, आमाले खाना खानुस् भनेर बुबालाई भन्दा बुबाले खान्न भन्दै “माथी हिँड् सुत्नुभन्दा अगाडी एक राउण्ड हानौं...” भन्नुभयो, त्यो वाक्य मेरो कानमा पर्यो र मैले टाउको घुमाएर बुबातिर हेरें । यतिखेर बुबाको हात आमाको र्याप नाईटरोबभित्र छिरेर आमाको बुब्स खेलाउन थालेको थियो ।
आमाले “छि ! के गर्नुभा’को... छोरा टि.भी. मै छ... त्यसमाथी झुम परेर आउनुभा’छ अहिले गर्दागर्दै मलाई अधकल्चो छोडेर निदाउने होला...” भन्दै बुबाको पेन्टमाथीबाटै लाँडो सुमसुम्याउनुभयो, बुबाले “आज तलाईं धित मर्नेगरी चिक्छु... हिंड..” भन्दै आमालाई समाएर माथी उक्लन थाल्नुभयो । भर्याङ्को केहि खुट्किला उक्लन नपाउँदै बुबाले आमाको र्याप नाईटरोब खोलेर भुईमा झारिदिनुभयो, त्यसपछी आमा र बुबा मेरो आँखाबाट ओझेल हुनुभयो । बुबा-आमाको बिचमा आज घमासान चिकाचिकी हुने निश्चित थियो । मलाई पनि माथी उक्लेर बुबा-आमाको चिकामारी हेरुँ हेरुँ भईरहेको थियो । टि.भी. हेर्दाहेर्दै मेरो मनले मलाई माथी गएर प्रत्यक्ष चिकामारी हेर्न उक्साईरहेको थियो, तर कसैले थाहा पाएभने भन्ने डरले म चुपचाप बसें । फेरी पनि जाँउ जाँउ भयो र म सोफाबाट उठेर भर्याङ्सम्म पुगें, आमा-बुबाको चिकाचिकीमा हल्का आमाको मुखबाट सित्कार तलैसम्म आइरहेको थियो, म खाली खुट्टाले बिरालोको चालमा केहि माथी पुगें । आवाज अलि प्रष्ट हुन थाल्यो, म अझै केहि माथी उक्लिएं । भर्याङ्गको ढोका खुल्लै थियो, चकमन्न अध्यारोको बिचमा मेरो आँखाले केहि ठम्याउन सकेन तर जब मेरो आँखा बुबाको कोठामा पर्यो, त्यो कोठाको ढोका पनि खुला नै थियो र बेडमा आमालाई सुताएर आमाको खुट्टा भुईमा पारेर कुकुरजस्तो पोजिसनमा बुबाले आमालाई चिक्दै हुनुहुन्थ्यो । केहि बेरमै बुबाले थाकेको अनुभव गर्नुभयो र आमालाई छोड्नुभयो अनि आफू बिस्तरामा लम्पसार परेर सुत्नुभयो । बुबाको ठाडो लाँडोमाथी आमाले टाङ्ग फट्याएर बस्नुभयो अनि आफैंले आफ्नो पोका समाउँदै मच्चिन थाल्दै भन्नुभयो “जब मलाई ईमोसन आउँछ अनि जहिल्यै यस्तै हो... अब कसले सान्त पारिदिन्छ मेरो पुती..” एक मनले त मैले “हुन्छ मात्र भन्नु न म शान्त पारिदिन्छु...” भन्दै आमाको छेउमा पुगौं कि जस्तो भयो । तर आमा बुबाको लाँडोमाथी मच्चिदाँ मच्चिदैं बुबाको लाँडो सानो भएर आमाको पुतीबाट आफैं बाहिर निस्केर सुत्यो । आमाले बुबाको छातीमा हातले प्याट्ट प्याट्ट पार्नुभयो, बुबाले केहि प्रतिकृया नजनाएपछी आमा बेडको एक छेउमा बसेर एक हातले बुब्स र अर्को हातले पुती खेलाउँदै गर्न थाल्नुभयो म तल बैठकमै उत्रिएँ र टि.भी. हेर्न थालें । बुबा-आमाको चिकाई देखेर मेरो लाँडो ठन्किएको थियो, म टि.भी. हेर्दाहेर्दै लाँडो पनि सुमसुम्याईरहेको थिएँ । एकैछिनमा आमा र्याप नाईटरोब लगाएर र्याप नाईटरोबको फिता बाँध्दै मेरो छेउमा आएर सोफामाथी बस्नुभयो । र्याप नाईटरोब लगाएकै भएपनि मेरो मस्तिष्कले आमालाई नाङ्गै देखिरहेको थियो । म घरिघरि नजर चोरेर आमालाई हेर्थें, आमाले एकोहोरो टि.भी.मै नजर गाडेर हेरिरहनुभएको थियो, मलाई थाहा थिएन आमाले खेल बुझ्नुहुन्न कि हुँदैन । केहिबेरमा म आमालाई रिमोट दिएर आफ्नो कोठामा छिरें अनि कम्प्युटर खोलेर आमाको फोटो हेर्न थालें, मेरो दिमागले के सोच्यो कुन्नी मैले आमाको फोटोलाई फोटोसपमा लोड गरें र क्लोनिङ्ग गर्दै एन्जेलिका टेलरको नाङ्गो फोटोमा एडजस्ट गर्न थालें । आमाको फोटोको त्यो काम सक्न मलाई झण्डै एक घण्टा लाग्यो, त्यो बिचमा मैले आमाको नाममा एकमुठी फुसी चढाएँ । ल्यापटप बन्द गरेर मैले आफ्नो कोठाको ढोका खोलेर एकपटक आमालाई हेरें, आमाको हात र्याप नाईटरोबको भित्र थियो र आमा सोफामै निदाइसक्नुभएको थियो । एकमनले त आमालाई समाएर चिक्दिउँ जस्तो भयो तर “आफ्नै आमालाई...” भन्ने शब्दले मैले आफैंले आफैंलाई धिक्कारें र सुतें ।
भाग्यमानी छोरो : भाग २ [Continue Reading]
भाग्यमानी छोरा : भाग १ - 'आमामाथी गिद्वे नजर' 2017-09-09T11:07:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Nepali Family Sex Nepali Sex Story
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: भाग्यमानी छोरा : भाग १ - 'आमामाथी गिद्वे नजर'